iphone 13 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye zvinobuda
Kuru Nhau & Ongororo iPhone 13 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye kudonha
Kunyangwe isu & apos; tichine mwedzi mishoma kubva kuburitswa kweiyo iPhone 13 nhepfenyuro, kwave kutove neakawanda makuhwa anoburitsa zvatinogona kutarisira kubva Apple & apos; s 2021 smartphone mutsara-up. Pazasi pane zvese zvatinoziva nezve iyo iPhone 13 izvozvi.
iPhone 13 kuburitsa zuva
iPhone 13 mutengo
iPhone 13 zita
iPhone 13 yekuchengetedza
iPhone 13 dhizaini
iPhone 13 kuratidza
iPhone 13 bhatiri
iPhone 13 maficha uye software
Dzazvino iPhone 13 idonhedza (yakagadziridzwa zuva nezuva)
Apple inonzi yakatanga kuita odha dzezvinhu zve iPhone 13 , kutanga kwemafoni kuri padyo.
Iyo iPhone 13 Pro uye Pro Max Ultra-yakafara makamera anoratidzira autofocus , anodaro indasitiri mukati Ming-Chi Kuo.
Leaker akagovana pikicha yezvinonzi zvinonzi iPhone 13 yemhuri dummy zvikamu , ichiratidza kumwe shanduko dhizaini pamusoro pegore rapfuura & apos; s mamodheru.
Shrunken notch, yakakura kamera, uye iyo nyowani iPhone 13 Pro dhizaini zvakaratidzirwa mumifananidzo mitsva yemafungiro.
Muongorori anovimbwa akataura kuti Apple inogona kusunungura iyo iPhone 13 munaGunyana 24 .
Kugadzirwa kweiyo iPhone 13 & apos; s A15 Bionic chip inonzi yakatanga muna Chivabvu.
Sekureva kwemuongorori Dan Ives, iyo iPhone 13 ichaburitswa munaGunyana 24, 2021
Mr. Ives akatipa chaiwo mazuva - achiti iyo Chiitiko che iPhone 13 chakatemerwa Nyamavhuvhu 14 , nepo iPhone 13 rekuburitsa zuva richava Nyamavhuvhu 24. Mazuva iwayo anotsigirwa nenyaya yekuti Apple inowanzo bata chiitiko che iPhone gore rega munaGunyana.
Chega chakasarudzika izvozvi raive gore rapfuura, nekuda kwematambudziko asina kutarisirwa akaunzwa mukugadzira nekutakura, pakati peimwe nzira dzakakosha idzo makambani anodawo kupfuura kuti aburitse chigadzirwa. Parizvino hapana zvinoratidza kuti kuburitswa kwe iPhone 13 kuchanonoka.
Kutenderedza $ 799 yeiyo iPhone 13
Tinoziva izvozvo Apple inoda kuwedzera kugadzirwa kwe iPhone muIndia uye famba ingangoita 20% yeiyo iPhone kugadzirwa kunze kweChina, asi isu & maapos; tichiri kuti tione kana izvi zvichizokanganisa mutengo wemangwana maPhones. Kubva ikozvino, hapana & apos hapana chinoratidza kuti isu tinofanirwa kutarisira shanduko huru mumitengo yeiuya iPhones.
Iyo iPhone 13 yakateedzana ingangodhura zvakada kufanana neiyo iPhone 12 akateedzana, ayo angaenzana nemitengo inotevera:
iPhone 13 Pro Max $ 1,099 £ 1,099
iPhone 13 kana iPhone 12S?
Izvo zvakataurwa kuti Apple inogona kufonera inotevera iPhone 'iPhone 12S' pachinzvimbo che 'iPhone 13', zvinofungidzirwa kuti nekuda kwayo iine mashoma ekuvandudza pamusoro peyaakatangira. Iyo nhamba yegumi nenomwe inoonekwa seisina rombo rakanaka mune dzimwe nyika, izvo zvinogona & apos; kuita chinzvimbo muApple & apos; s mazita echirongwa.
Nekudaro, parizvino hapana & apos; haina kuburitswa kana ruzivo rwepamutemo kutsigira izvi kukwira kumusoro, saka tinogona zvirokwazvo kutarisira zita renhepfenyuro iyi kuve 'iPhone 13'.
Iyo iPhone 13 kamera module iri yakati kurei kupfuura iyo gumi nembiri (inoratidzwa pano)
Sekureva kwemuongorori Ming-Chi Kuo iyo iPhone 13 & apos; s Ultra wide-angle kamera ichagadziridzwa kuita f / 1.8, 6P (matanhatu-element lens). Iye ataurawo kuti iyo yekupedzisira-yakafara makamera eiyo iPhone 13 Pro uye Pro Max ichaita autofocus .
Tinotarisira kuti kamera module pachayo haizoshanduke zvakanyanya, kana zvachose, kubva module inoonekwa pane iyo iPhone 12 uye iPhone 11, parutivi nekuwedzera kushoma kwehukuru. Kana ari iwo makamera pachawo - zoom kamera inogona kudzoka, padivi peiyo kamera huru uye yakataurwa pamusoro apa Ultra-yakafara kamera.
Musi waZvita wa2020, veKorea vezvenhau vakasimbisa runyerekupe rwekuti Apple ichaburitsa iPhone periscope zoom zvinhu kubva kuSamsung. Nekudaro, mhedzisiro kubva mukudyidzana iyi parizvino inotarisirwa kuti ionekwe pasina nguva kupfuura iyo iPhone 14.
Musi waNdira 9 wa2021, chirevo chakanangana neruzivo rwekutengesa zvinhu zvakataura izvozvo iPhone 13 kamera inovandudzwa uye yakagadziridzwa FaceID setup zvinotarisirwa. Idzo kukwidziridzwa mumubvunzo dzinonzi dzinosanganisira 'yakatetepa' TrueDepth kamera, iyo inogona zvakare kureva notch diki pamusoro peiyo iPhone 13 kuratidza.
Chirevo chakazotevera (Kukadzi 2, 2021) kubva kuvanoongorora veBarclays yakapihwa mikuru yekuvandudza kamera yeApple & apos; yese iPhone 13 mhuri , zvakanyanya kuvandudzwa Ultra wide-angle kamera kugona. Iyo iPhone 13, iPhone 13 mini, 13 Pro, uye 13 Pro Max inogona kunge iri kuwana f / 1.8 aperture Ultra-wide kamera, kubva ku f / 2.4 pane iyo iPhone 12 nhevedzano. Izvi zvakafanotaurwa zvakare naKoo, sezvataurwa pamusoro.
Apple inogona zvakare kuunza iyo astrophotography ficha , iyo ichatora mifananidzo yakajeka yedenga rehusiku, kusanganisira nyeredzi nemwedzi.
Kuwedzeredzwa kwePortrait Mode vhidhiyo yekurekodha zvataurwa nevano leaker zvakare. Mushure mekurekodha iyo iPhone Portrait Mode vhidhiyo, vashandisi vanonzi vanokwanisa kushandura vhidhiyo & apos; s kudzika kwemunda kwavanofarira. Mhedzisiro yacho ichavhiringidza chero kumashure kana kumberi zvinhu sekuenderana nemushandisi & apos; s kuda.
Ese iPhone 13 mamodheru anozoisa LiDAR scanner . Uye zvakare, iyo iPhone 13 Pro Max uye iPhone 13 mini yakaburitswa kuratidza yakakura kamera makomba uye makuru ma sensors , iyo yatinogona kutarisira zvine musoro kuve iyo kesi neese iPhone 13 mamodheru.
Kana zviri zveiyo iPhone 13 sarudzo dzekuchengetera, kwave nekufungidzira kuti Apple inowedzera zvakapetwa pamusoro pekuchengetedza kubva gore rapfuura & apos; s 512GB kusvika 1TB yeiyo iPhone 13. Imwezve yazvino kuburitsa yakati izvo iPhone 13 Pro uye Max mamodheru achave ne1TB yekuchengetedza sarudzo (Chiuru gigabytes).
Notch ichave ichiderera
iPhone 13 dhizaini shanduko, yakapfupikiswa:
Notch idiki muhupamhi
Iyo kamera module iri yakati kurei zvishoma
Iyo kamera kuronga iri diagonal pane iyo iPhone 13 uye mini mamodheru
Ese mamodheru angangoita 0.26mm mukobvu
Kune iyo iPhone 13 nhepfenyuro isu tinotarisira idiki, asi ichiripo notch uye yakafanana yakafanana flat dhizaini senge pagore rapfuura & apos; s mamodheru.
Mukupera kwaKurume, kudonha kunonzi kuri kuratidza iPhone 13 girazi mapaneru yakaratidza kuti iyo iPhone 13 notch zvirokwazvo inogona kuzove inoshamisa zvishoma, zvirinani hupamhi. Kutsigira izvi, Kubvumbi leak inonzi iri kuratidza iPhone 13 mini CAD inoshandura yakaratidzawo nhare dzine notch diki uye kumisikidza kwakasiyana kwemakamera avo kumashure.
Aya ndiwo maratidziro anoita iPhone 13 & apos; s uye notch ichaita senge, kana kudonhedza pamusoro kwenyaya kubva Kurume kuri kwechokwadi
Pakati paKukadzi, leakers vakati iyo iPhone 13 ichawana grippier, zvishoma zvishoma zvinyorwa zvakapfava matte kumashure , inozove yakasununguka kubata. Mukati meiyo iPhone 13, magineti akasimba anoshandiswa kweMagSafe accessories.
Imwe yapfuura, yakataurwa kare mushumo kubva muna Ndira 9 yakati izvozvo ese iPhone 13 akasiyana achange ave kuwedzera mukobvu ne 0.26mm, pamwe nekuda kwavo kuwana mabhatiri akakura kupfuura chizvarwa chekare chePhones.
Musi waNdira 15, a Bloomberg chirevo chakaratidza kuti iyo iPhone 13 inozopedzisira yawana in-kuratidza Kubata ID yeminwe yekunzwa . Isu & maapositi tave ne-inoratidzira maseru pamafoni eApple kwechinguva uye tichifunga chokwadi chekuti vazhinji vakapfeka mamask uye nekudaro vachiona Face ID ichinetsa izvozvi, kudzoka kweTouch ID, asi kwakagadziridzwa kwe2021, zvinoita kunge kune musoro. Nekudaro, pane & apos; s mukana wekuti chinhu chakadai chinganonoka kune iyo iPhone 14 nhepfenyuro panzvimbo.
Matipipi akati wandei akataurawo kuti iyo iPhone 13 inogona kunge iri yekutanga isina portable iPhone, ichivimba chete nechaji isina waya kuburikidza neMagSafe. Mukupera kwaFebruary, zvakaratidzwa kuti Apple iri kuyedza sei isina portable iPhone yaigona kudzoreredza data , zvichiratidza kuti yakadaro iPhone iri kuuya pakupedzisira.
Musi waApril 13, yakaburitswa iPhone 13 5G inopa yakaratidza chidiki notch zvakare. Mukati meiyo notch, ma sensors airatidzika kunge akagadzirwazve zvishoma, uyezve paive nechina chekucheka icho chingangodaro chiri chekuwedzera mutauri kana yechipiri kumberi kamera.
Musi waJune 23, 2021, leaker SonnyDickson yakatumira paTwitter iyo inotevera pikicha yeanofungidzirwa iPhone 13 dummy mamodheru, achiratidza misana yavo.
Idzo iPhone 13 dummy mamodheru anoenderana nekudonha kwakapfuura zvichiratidza kuti nhare dzichava nemakamera kamera makamera pamusoro pegore rapfuura. Zvakare base iPhone 13 uye iyo iPhone 13 mini inoratidzwa kune mutambo kurudziro yakagadziridzwa diagonal kurongeka kwemakamera avo.
Vamwe vatambi vataura kuti iyo iPhone 13 nhepfenyuro inogona kutamba kuchinja OLED inoratidzira panzvimbo yeLCD. Kune zvekare zvinotarisirwa kune iyo iPhone 13 & apos; s inoratidzira kuve ine yakanyanya-kutsetseka 120Hz mwero yekuzorodza (yakafanana neProMotion pane iyo iPad Pro), iyo yakanga isiri & apos; isiripo pane iyo iPhone 12 nhevedzano. zvinonzi nekuda kwekunetseka kwehupenyu hwebhatiri .
Kubvira kwaDecember 2020 kwakaratidza kuti iyo iPhone 13 inogona kupedzisira yawana Inogara Ichiratidzwa chimiro. LTPO inogara iratidziro yaive zvakare yakazosimbiswazve mune yaFebruary 2021 mushumo ne tipsters Max Weinbach naJon Prosser. Iyo inogara-pane yekuratidzira ficha inonzi iine mashoma maitiro. Icharatidza wachi, pamwe nebhatiri kubhadharisa, nepo zviziviso zvichinzi & apos; inoratidzwa uchishandisa bhaa nemifananidzo '.
Kune iyo iPhone Pro uye Pro Max mamodheru, iwo maratidziro anotarisirwa kupihwa neasina mumwe kunze kweSamsung. Mukupera kwaKurume wa2021, 120Hz LTPO kuratidzwa kubva kuSamsung kwairehwa iyo iPhone 13 vanonzi vanga vava kuda kupinda mukugadzirwa, sekureva kweUBI Research.
Uye zvechokwadi mukupera kwaMay, Samsung yakanzi iri kutanga kugadzirwa kweiyo iPhone 13 Pro & apos; s 120Hz kuratidza . Iwo maratidziro eProMotion anozoshandiswa pane iyo iPhone 13 Pro uye iPhone 13 Pro Max chete. Kana iri iyo iPhone 13 mini uye iPhone 13, LG ndiyo inozopa Apple ine shoma shoma 60Hz mapaneru.
Nezve iyo iPhone 13 kuratidza saizi, sekureva kwa kutanga iPhone 13 runyerekupe , tinogona kutarisira kuti iyo iPhone 13 nhepfenyuro ichave iri padhuze neiyo iPhone 12 nhepfenyuro. Mikana inosanganisira masikisi akafanana ekuratidzira kana akanyanya kukura, nekuda kweakadzikiswa mabhezeri. Izvi zvinoreva kuti pane zvirinani isu tinogona kutarisira anotevera iPhone 13 ekuratidzira saizi:
iPhone 13 mini-5.4-inch kuratidzwa pane resolution ye 1080 x 2340 pixels (476 PPI, 60Hz)
iPhone 13-6.1-inch kuratidzwa pane resolution ye 1170 x 2532 pixels (460 PPI, 60Hz)
iPhone 13 Pro-6.1-inch kuratidzwa pane resolution ye 1170 x 2532 pixels (460 PPI, 120Hz, OLED)
iPhone 13 Pro Max-6.7-inch inoratidzira pakagadziriswa 1288 x 2778 pixels (458 PPI, 120Hz, OLED)
Anovimba muongorori Ming-Chi Kuo akati Apple yasunungura imwe nzvimbo yepanyama mukati memutumbi we iPhone 13 & apos; iPhone 13 nhepfenyuro inogona kuve nemabhatiri akakura . Uye zvakare, iyo iPhone 13 & apos; s A15 Bionic chip inogona kushanda nesimba zvakanyanya kupfuura iyo iPhone 12 & apos; s A14, iyo yaizowedzerawo kune zvirinani kuita kwehupenyu hwebhatiri.
Mukutanga kwaJune, zvakanyatso kuburitswa kuti iyo iPhone 13 dzakateedzana bhatiri masimba akawedzerwa pamusoro peiyo iPhone 12.
Zvinoenderana nekudonha kwazvino, iwo iPhone 13 akateedzana 'saizi bhatiri ichave iri:
iPhone 13 mini-2,406 naRaama
iPhone 13-3,095 mAh
iPhone 13 Pro Max-4,352 naRaama
Nezvekureva, aya ndiwo masasi ebhatiri egore rapfuura & apos; s iPhone 12 mhando:
iPhone 12 mini-2,227 naRaama
iPhone 12-2,815 mAh
iPhone 12 Pro-2,815 mAh
iPhone 12 Pro Max-3,687 naRaama
Iwe unogona zvakare kuwana inobatsira yedu yakatsaurirwa iPhone 13 bhatiri inodonha chinyorwa.
Iyo iPhone ichachaja zvisina waya nejaja yeMagSafe Iyo & apos; s zvine chokwadi chekuti iPhone 13 ichave nerutsigiro rwe5G. Pakati, iyo iPhone 13 nhepfenyuro ichave inofambiswa neApple A15 Bionic chip.
Fingerprint kuvhura inofungidzirwa kuti ichadzoka pane mamwe ma iPhone 14 mamodheru muchimiro che pasi pechiso Kubata ID . Kufanotaura uku kunobva kuMing-Chi Kuo, asi isu & maapos hatisati taona humbowo hwakasimba hweTouch ID & apos; kudzoka panguva ino. Kana iri iyo iPhone 13, parizvino fungidziro zhinji inotungamira kune iyo ichingova neFace ID, asi mukana weTouch ID, kunyangwe iri diki, haisi & apos; haibve pamubvunzo izvozvi.
Panyaya yesoftware, iyo iPhone 13 ichave ichimhanya iOS 15, iri kuuya kune ese anowirirana iPhones kudonha uku, pamwe munaGunyana, senge akawanda apfuura iOS shanduro. iOS 15 inounza zvigadziriso zveFaceTime, nzira dzekutarisisa, Live Rugwaro, kugadzirisazve Safari uye zvimwe zvinhu zvaunogona kutarisa mukati medu. Kuongorora kweIOS 15 .
Ndinofanira kumirira iPhone 13?
Kufungisisa kuti iyo iPhone 13 ichave yakakosha here? Let & apos; s edza kupindura kana iwe uchifanira kumirira iyo iPhone 13 kana kunamatira neimwe yegore rapfuura & apos; s mamodheru.
Izvo iwe & apos; zvauchazowana nekukwiridzira kune iyo iPhone 13:
Iyo 120Hz ProMotion OLED kuratidza (pane iyo Pro uye Pro Max)
Hupenyu huri nani hwebhatiri
Zvikuru zvekuchengetedza sarudzo
Zvitsva kamera kamera
Iwe unofanirwa kumirira iyo iPhone 13 kanaiwe & apos; unokoshesa izvo zvinounza patafura pamusoro pechizvarwa chakapfuura. Sezvineiwo, ari nani makamera ane wide-angle autofocus, yakajeka zvikuru 120Hz ProMotion kuratidza, pamwe nekuvandudza hupenyu hwebhatiri. Iwe & apos; uchave zvakare uchiwana imwe yeramangwana-chiratidzo 5G foni. Kana izvi zvese zvichinzwika zvakanaka, zvinofanirwa kukwidziridzwa kune iyo iPhone 13 nhepfenyuro.
Iyo nyowani iPhone 13 yakateedzana ichave zvakare ichiunza hombe yekuchengetedza akasiyana, anonzi anosvika kune yakazara 1TB (1 000 gigabytes). Nekudaro, kana iwe & apos; pari parizvino uchizviwana iwe uchifanira kubvisa chengetedzo pane yako iPhone, kukwidziridzira kune iyo iPhone 13 uye kutora mukana wayo wepamusoro wekuchengetedza kugona kunenge kuchikosha chaizvo.
Iwe haufanire kumirira iyo iPhone 13 kanahapana chatakataura nezvako kusvika ikozvino chakakufadza. Iyo iPhone 13 nhepfenyuro zvine nharo haisi & apos; hachisi chikuru kusimudzira pamusoro pevatangiri vayo, saka kushandisa 12 modhi yeimwe gore yakanyatsonaka. Tinotarisira kukwidziridzwa kukuru kwegore rinouya & apos; s iPhone 14, saka ungangoda kubatirira kune yako yazvino iPhone kune rimwe gore uye kusimudzira chete kana Apple ichinyatso kuunza chimwe chinhu chitsva chaunowana chinonakidza. Uye zvakare, kana iwe uine yekare iPhone, pano & nei apos; s nei uchifanira kufunga zvakare kutenga iyo iPhone 12 .
mutsauko pakati pe7 ne7s
pre order samsung chinyorwa 9
Zvidiki zvisina musoro: nei pasina bhatani re 'Pause' rekurekodha vhidhiyo pane iyo iPhone uye stock Android?
Motorola inotanga kuburitsa Android 7.1.1 Nougat yeMoto X Play
Maitiro ekudzima yako Galaxy Note 10 kana Cherechedzo 10+
T-Mobile's MhuriWhere inopa yemitezo yemhuri yekutevera masevhisi